Digby: mitondra fiara amin'ny varotra eo an-toerana miaraka amin'ny fampiharana finday | Martech Zone
Digby: mitondra fiara amin'ny varotra eo an-toerana miaraka amin'ny fampiharana finday
Alarobia 2 Janoary 2013 Douglas Karr
Mino aho fa eo amin'ny rindrina ny soratra ary ny famarotana antsinjarany izao dia manao fampiasam-bola ilaina amin'ny paikady finday. Nanjary lakilen'ny fikarohana sy fividianana fividianana ny finday. Miaraka amin'ny fananganana finday avo lenta an'ny smartphone, tsy misy isalasalana ny fiantraikan'ny finday amin'ny taona ho avy. Digby dia manolotra SDK ahafahan'ny rindranasa finday mpivarotra mampiditra azy mora foana geofencing - ataovy izay hahalalanao izany toerana izany amin'ny alàlan'ny toerana misy an'i Digby Analytics ary ny fahaizan'ny marketing.
Amin'ny alàlan'ny Digby Localpoint ™ Mobile Platform, misy ny Analytics, Outreach, Venue, ary Storefront, Digby dia mampiasa teknolojia miorina amin'ny toerana hamelana ireo marika hanosika ireo hafatra mahalala ny toerana mahomby sy kendrena ary hitaona ny fifandraisana amin'ireo mpanjifany. ny fantsona rehetra - amin'ny alàlan'ny fiainany marika marika manokana.
Localpoint Outreach - Ireo mpanjifa dia mety ho lavitra ny fifanarahana tsara indrindra aminao ary tsy hahalala azy mihitsy. Maninona no avelany handeha eo izy ireo, raha afaka manatona azy eo no ho eo sy misarika anao manokana ary mitaona azy ireo hiditra ao amin'ilay magazay amin'ny alàlan'ny firesahana amin'izy ireo mivantana amin'ny alàlan'ny fampiharana findainao? Digby Localpoint Outreach dia manampy anao hanao izany fifandraisana izany miaraka amina fahaiza-manao marketing amin'ny toerana misy anao natokana ho an'ny marika.
Toerana eo an-toerana - Ireo mpanjifa afaka smartphone dia afaka manamarina ny vidin'ny mpifaninana raha mandeha eo amin'ny lalantsara misy anao. Mankanesa amin'ny fanafihana amin'ny alàlan'ny fanomezana ny traikefa finday misy marika anao izay mitarika lanja, fifamatorana ary ny karatra fahatokisana farany. Digby Localpoint Venue dia mamela anao hanana fifampiraharahana am-pivarotana ao amin'ny magazay miaraka amina fitaovana mahery vaika hampahafantarana, hanampiana ary hanomezana aingam-panahy ireo mpanjifa mifandraika amin'ny fotoana sy ny toerana tena zava-dehibe.
Localpoint Analytics - Mihoatra ny 90% ny vola miditra amin'ny antsinjarany dia avy amin'ny magazay fa kely dia kely izao ny momba ny mpanjifa Analytics ao amin'ny magazay. Digby Localpoint Analytics dia mamela anao hahita fomba web Analytics ho an'ny toerana misy anao ara-batana sy angon-drakitra sarobidy momba ny fomba sy ny fotoana hitsidihan'ny mpanjifanao ny fivarotana anao, ahafahanao mianatra bebe kokoa momba azy ireo hanompo azy ireo tsaratsara kokoa.
Localpoint Storefront - Takian'ny mpanjifa ny fikarohanay marika, mizaha ary mividy traikefa finday ho mahafinaritra, mety ary sarobidy na amin'ny tolotra na atiny. Digby Localpoint Storefront dia ahafahanao mamorona traikefa mividy varotra tokana sy vita varotra ary manome aingam-panahy sy mampahafantatra ny mpanjifanao amin'ny alàlan'ny fampiharana finday misy marika sy tranokala voavolavola finday.
Tags: Androiddigbydigby localpointgeofencingiPhonefinday eo an-toeranatoerana mahalalaanalytics amin'ny findayfinday sdk
Sivano amin'ny Cloze ny tabataba sosialinao